Biçerovaဘူတာရုံနှင့် Menemen ဘူတာအဆောက်အအုံမြေညီထပ်ပြုပြင်ခြင်း RayHaber
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုတင်ဒါရလဒ်များ၏Biçerovဘူတာအဆောက်အအုံနှင့် Menemen ဘူတာအဆောက်အအုံမြေညီထပ်ပြုပြင်ရေးလုပ်ခြင်း
18 / 09 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, အထွေထွေ 0
bicerov ဘူတာရုံ menemen ဘူတာရုံအဆောက်အဦများနှင့်အဆောက်အဦးအထပ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုပြင်ရေးအပူ yapim ၏စွမ်းဆောင်ရည်များလုပ်ရမည်
Biçerovဘူတာအဆောက်အအုံပြီးတော့ Menemen ဘူတာကို Maintenance စာချုပ်များရလဒ်ဖျော်ဖြေ၏အဆောက်အဦးမြေညီထပ်
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး3။ အစိုင်အခဲကို Maintenance ဖျော်ဖြေBiçerovဘူတာအဆောက်အအုံပြီးတော့ Menemen ဘူတာအဆောက်အအုံမြေပြင်နှုန်း 2019 အကြောင်းကိုကုန်ကျသည့်ဒေသဆိုင်ရာယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory Control ကိုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 404206 / 404.632,68 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 557.086,87 TL, အလုပ်နူးညံ့ 25 ကုမ္ပဏီများမှလေလံဆွဲထားပြီးဖြင့်အတိအကျမသိရသေးရလဒ်များကိုစာချုပ်ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ် အဆိုပြုချက်ကိုနှုန်း 405.234,00 တောင်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးရယူလိုက်သည်။ နုလေလံပါဝင်6ကုမ္ပဏီများကန့်သတ်တန်ဖိုးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, ဘူတာရုံအဆောက်အဦး၏2အရေအတွက်ဆောက်လုပ်ရေး, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်ဖုံးလွှမ်း။ ပေးပို့အလုပ် 150 (တရာငါးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကို Maintenance ဖျော်ဖြေ၏Biçerovဘူတာအဆောက်အအုံနှင့် Menemen ဘူတာအဆောက်အအုံမြေညီထပ် 29 / 08 / 2019 ကို Maintenance သမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration ရုံးချုပ် (TCDD)3ဖျော်ဖြေ၏Biçerovဘူတာအဆောက်အအုံနှင့် Menemen ဘူတာအဆောက်အအုံမြေညီထပ်။ ဝယ်ယူခြင်းနှင့်စာရင်းထိန်းချုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာBİÇEROVဒေသတွင်းဘူတာအဆောက်အအုံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် MAINTENANCE 4734 အမှတ်အပိုဒ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးပညတ်တရား၏ 19 အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်အောင်၏ MENEMEN GAR ဆောကျမှုမြေညီထပ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 404206 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324643131 - 2324647798 ဂ) e-mail, ...
Biçerov To-Nemport မီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းတင်ဒါရလဒ်များ၏ bodywork Making 17 / 01 / 2019 Biçerovနှင့်အတူပလက်ဖောင်းပေါ်ပြုလုပ်ခြင်း၏စတော့အိတ် Yard ကွန်တိန်နာ, စောင့်ရှောက်မှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်လမ်းမကြီးလုပ်ခြင်းနှင့်Biçerovဘူတာ 12စည်းမျဉ်းဥပဒေတူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး3၏စီးပွားရေး To-nemport မီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်း။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2018 / 676379 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 9.127.811,09 TL နှင့် 12.807.437,17 TL, အရာBiçerovဘူတာ 1 ထိုအခါမီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းများ၏ superstructure ၏ To-nemport လုပ်ခြင်းအလုပ်နူးညံ့2ကုမ္ပဏီလေလံဆွဲထားပြီးBiçerovနှင့်အတူ Making 44 ကွန်တိန်နာစတော့အိတ် Yard, ကို Maintenance, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်လမ်းမကြီးထိန်းညှိအကြောင်းကိုကုန်ကျစရိတ် နှင့် TL 9.219.880,00 အဆိုပြုချက်ကိုAÇIKALINအခြေခံအဆောက်အအုံ SAN အပြီးသတ်အတွက်မရည်ရွယ်သောအကျိုးဆက်များကစာချုပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ နေကြပါပြီ။ , LTD ။ ကာလသား + အခွင့်အရေး KARABULUT ဖက်စပ်ရရှိခဲ့သည်။ နူးညံ့သော ...
အဆိုပါ Nemport Biçerovမီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းတင်ဒါရလဒ်များ၏ bodywork Making 28 / 03 / 2019 စတော့အိတ် Yard ကွန်တိန်နာ, စောင့်ရှောက်မှု, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်လမ်းမကြီးများBiçerovဘူတာ 12နှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေမှ Nemport တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD3၏ bodywork ၏မီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းတင်ဒါရလဒ်Biçerovနှင့်အတူပြုသည်ကိုအောင်။ ဒေသဆိုင်ရာယ်ယူခြင်း Inventory Control ကိုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2018 / 676379 JCC အရေအတွက်မီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းများ၏ superstructure ၏ 12.807.437,17 ကွန်တိန်နာစတော့အိတ် Yard, ကို Maintenance, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်လမ်းမကြီးပြုလုပ်ခြင်းနှင့်Biçerov၏Biçerovဘူတာ 1 နှင့်စည်းမျဉ်းဥပဒေမှ Nemport လုပ်ခြင်းအလုပ်နူးညံ့2ကုမ္ပဏီတခုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဆေးလိပ်သောက်လေလံဆွဲသည့် 43 TL ခန့်ကုန်ကျ နုလေလံ£ 9.219.880,00 Açıkalınအခြေခံအဆောက်အအုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၌ပေးသောရလဒ်များအရသိရသည်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးလီမိတက်ကုမ္ပဏီ + Hakan Khan က Khan ကဆောက်လုပ်ရေးစီးပွားရေး ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Biçerov၏ဘူတာရုံဧရိယာ၏ Concreting 23 / 11 / 2015 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)3များ၏တရားရုံး TC Biçerov gar အထွေထွေဒါရိုက်တာ၏ဘိလပ်မြေ။ ကွန်ကရစ်တစ်ဝိုက်စီမံခန့်ခွဲရေးBİÇEROV GAR အစစ်အမှန်အိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် site ကိုအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 157505 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ATATURK CADDESI 121 / ALSANCAK KONAK / IZMIR ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2324640928 - 2324640928 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: က c) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာကဒီမှာမြင်နိုင်ပါသည်: https: / က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်၏နူးညံ့မှ 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ် /ekap.kik.gov.tr/ekap/: ...
အဆိုပါတင်ဒါရလဒ်များ၏ Landscaping ၏ Toprakkale ဘူတာ Yard ဘူတာအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Don'ts ၌တွေ့ 28 / 09 / 2018 Toprakkale ဘူတာ Yard ဘူတာအဆောက်အအုံပြည်သူ့အိမ်သာထဲမှာတွေ့သည်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD6၏ Landscaping ၏လုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်း။ ယ်ယူခြင်းနှင့် Inventory Control ကိုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု 2018 / 423056 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 554.555,34 TL နှင့် 729.583,01 လေလံစမ်းကြည့်ပါစမ်းကြည့်ပါ tweaking တွေ့ဘူတာအဆောက်အအုံနှင့်ပြည်သူ့အိမ်သာပြန်လည်ထူထောင်ရေးထို Landscaping အလုပ်လုပ်နူးညံ့ 1 ကုမ္ပဏီများမှဆိုရင် single ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်တင်ဒါအတွက် Toprakkale ဘူတာ Yard နှုန်း 592.239,06 ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. VIRGO တည်ဆောက်နေ TRADE ကို TAAH ။ TURZ ။ , LTD ။ STI ။ ကုမ္ပဏီရရှိထားပြီးပါပြီ။ ပြည်သူ့အိမ်သာထဲမှာတွေ့သည်တင်ဒါ Toprakkale ဘူတာ Yard ဘူတာအဆောက်အအုံပြီးတော့ ...
Biçerov To-Nemport မီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းတင်ဒါရလဒ်များ၏ bodywork Making
အဆိုပါ Nemport Biçerovမီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းတင်ဒါရလဒ်များ၏ bodywork Making
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Biçerov၏ဘူတာရုံဧရိယာ၏ Concreting
အဆိုပါတင်ဒါရလဒ်များ၏ Landscaping ၏ Toprakkale ဘူတာ Yard ဘူတာအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Don'ts ၌တွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မီးရထားအလုပ်လုပ်Yaptırılacaktır - စတော့အိတ် Yard ဘူတာBiçerov၏စည်းမျဉ်းဥပဒေ
3 ။ ဧရိယာBiçerovမှ - Bergama Etüt-နယူးမီးရထားစီမံကိန်းဒီဇိုင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းဝယ်ယူရေး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Şarkışlaဘူတာအဆောက်အအုံသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကူးပြောင်းခြင်း, Bostankaya ဘူတာအဆောက်အအုံအတွက်ဘွိုင်လာတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သစ်သား Ekinova အတူ Kocatepe ဘူတာအဆောက်အအုံနှင့်အိမ်ရာကို Maintenance အတွက် Burdurd Making
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Mardin ဘူတာကို Maintenance ၏အဆောက်အဦ Making